Ny vehivavy mampiaraka - Fantatrao mahaliana ny vehivavy amin'ny VideoChat
Ny vehivavy mampiaraka — Fantatrao mahaliana ny vehivavy amin’ny VideoChat
Raha toa ianao ka tokan-tena lehilahy sy mitady ny vehivavy iray izay aho dia afaka mizara fotoana manokana. Maro ireo tokan-tena ny vehivavy izay te-hitsena ny fanahiny vady, sy izay mety ho anao. Ny fomba tsara indrindra mba hahafantatra ny olona vaovao sy mahaliana no mivoaka ary misy toerana maro tany Italia izay afaka hihaona ny vehivavy ny nofy: ao amin’ny trano fisakafoanana, ao amin’ny museum na ny iray amin’ireo marobe ny hetsika karakarain’ny lahatsary amin’ny Chat isam-bolana. Tsy mila toerana manokana, dia afaka mahazo ny mahafantatra mahaliana ny vehivavy raha ianao tsena tao amin’ny fivarotana lehibe na raha toa ianao ka ny fikasana mba hifidy izay talantalana mba hividy amin’ny Ikea, ny toerana lehibe mba hahazoana vaovao fivoriana. Na izany aza, izany dia marina fa misy ny toerana misy anao dia afaka manana bebe kokoa mba hihaona amin’ny vehivavy izay afaka ny ho tonga ny fanahy vady. Amin’ny hariva ao amin’ny vondrona Amin’ny ankapobeny, ny week-end dia manana tombotsoa manokana fotoana rehetra ireo tokan-tena fa te hihaona sy hahafantatra ny vehivavy tokan-tena iray. Izay dia ny fankalazana ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’i ny havany, na ny kiendiendy eo amin’ny namana, ny fanahy vady dia mety ho fotsiny manodidina amin’ny zorony. Avy eo dia, raha toa ka efa nahatsikaritra vehivavy iray izay efa mahazatra ny namana, na dia tsara kokoa: izany dia ho mora kokoa ho anao ny hanombohana ny resaka miaraka amin’ny ankizivavy ianao fa te-handresy, na, raha toa ianao saro-kenatra, dia afaka manontany ny namana mba ho fampidiran-dresaka. Ny asa mba Handresy ny asa mpiara-miasa amiko dia tsy ho sarotra ho toy ny hevitrao. Dia afaka miezaka ny hitondra ny vehivavy tokan-tena iray izay mahaliana anao, nandritra ny coffee break, mandritra ny fisakafoanana miaraka amin’ny mpiara-miasa aminy na ho an’ny kokoa nibedy sy be herim-po, mivantana amin’ny alalan’ny chat. Ny aperitif rehefa ela ny andro asa dia afaka ny ho tsara ny fialan-tsiny dresaka tokana ny nofy. Ao ny hevi-maro ny vehivavy tokan-tena izay zatra hihaona amin’ny namana ao amin’ny bar, na eo amin’ny efi-trano izay dihy ho an’ny manantena ny hihaona ny fanahy vady. Na dia mandihy dia tsy ny zavatra, dia anontanio azy, na izany aza, ny dihy iray malefaka eo amin’ny lalana. Vehivavy tia lehilahy izay mahalala ny fomba hananihany sy hampifalifaly anao. Ny fivoriana tsara tarehy indrindra sy tantaram-pitiavana indraindray dia manomboka ny fitsarana an-tendrony ny tenany, amin’ny alalan’ny fametrahana angamba na dia ny mampiseho ireo izay ny tsy fahalavorariantsika. Ao amin’ny tranom-bakoka ny mpankafy ny kanto sy ny kolontsaina azo heverina ho tena tsara vintana: tranom-bakoka, ny fampirantiana dia ny sasany ny toerana tena toerana amin’ny vehivavy tokan-tena isan-taona. Raha ny marina, raha ny hevitrao momba izany, dia mora kokoa ny hametraka ny resaka nifanaovany tamin’ny vehivavy iray izay nizara ny miaraka aminao ny fitiavana ho an’ny romana kanto na ho impressionism, fa tsy amin’ny iray nihaona eny an-dalambe. Ary avy eo, ianao no mahalala, ny vehivavy dia mankasitraka ireo lehilahy izay tia ny kolontsaina. Tao amin’ny tambajotra sosialy tambajotra sosialy dia fomba lehibe mba hanomezana vaovao tokan-tena, indrindra fa raha toa ianao saro-kenatra, na raha toa ka tsy mbola mahatsapa vonona ny fanondranana loatra. Facebook, Twitter, Instagram: maro ny vehivavy tokan-tena fa manana nomerika mombamomba azy sy ny mitady ny fitiavana sy ny olona vaovao izay mba hiresaka.
Ny fikambanana, ny tranom-bakoka, ny toeram-pivarotana: italiana tanàn-dehibe dia feno ny toerana izay afaka hihaona ny vehivavy tokan-tena, fa raha te-hampitombo ny vintana, ny teknolojia dia tonga ny fanampiana. Fa ianao dia mitoetra ao amin’ny Avaratra, ny Foibe na ny any Atsimo dia tsy maninona, satria ny aterineto dia manome anao ny fahafahana mivory maro ny vehivavy tokan-tena avy isaky ny ampahany Italia sy ho afaka hiresaka aminy avy amin’ny fampiononana ao an-trano. Noho ny mampiaraka toerana toerana tena, mahafantatra ny olona, ary mahita ny fanahinao vady tsy mbola nisy toy izany mora sy mahafinaritra.
Inona no miandry mba hanandrana izany
Turin dia tanàna manan-karena amin’ny tantara, ny zavakanto sy ny kolontsaina. Maro ny toerana izay afaka mandeha miala voly, hanampy ny Fivoriana tany Turin, ny Tanàna ny Mozika: izay mamaky eo am-pidirana ao an-tanànan’i Parma. Fantatra amin’ny maha-toerana nahaterahan’i ny fanampiana Fivoriana ao Parma, malaza ho tsara ny sakafo sy ho an’ireo asa hiaina ao amin’ny fomba emilia, mijoro avy ao Italia ho fanampiana ireo Fivoriana ao Parma
← Ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana amin'ny tsindraindray mpiara-mitory, rosiana chat
Mampiaraka ao Italia →